Incwadi umoya isiphekepheke inkonzo ekhethekileyo lokugqibela moya irenti zohambo buqu okanye ishishini ukuba beze lokugqibela ibhola ekhatywayo kwiNdebe yeHlabathi Russia football ubuntshatsheli. Iiflayithi kule moya sele oversubscribed kodwa kunjalo uyakwazi babhukishe jet labucala ukuya imidlalo
INdebe yeHlabathi yeFIFA sesona siganeko zemidlalo inombolo enye ehlabathini. Ndithi umcimbi elithi, kodwa kunjalo nje siphantsi esingathethekiyo. INdebe yeHlabathi i Extravaganza of sako,wonk 'ubani osukuba kukho ukuba ixesha lobomi babo. kunjalo, Abantu abaninzi abayiqondi into yokuba xa kuthe ngokwalo iyamangalisa uhambo kukho into enye ngokupheleleyo ukuba sihlele.
Ngaphandle yokuba Kufuneka ndipakishe, nto leyo into akukho mntu omthandayo ukwenza, kufuneka kwakhona ukuba wenze izigqibo ngento ntoni ukuhamba. ukuba, ngethuba, idriving yokhetho ke leyo ingxaki ngokwayo. Kuba abo Undizela nangona iingxaki kufake. Izinto ezifana apho ubeke imoto emva ukuya kwisikhululo, kangakanani na inkonzo kwi-moya uza kuba, indlela jam-yagcwalisa moya ezi,nokurenta imoto emva kokuba sele ufikile.
Ukuthatha imidlalo yendebe yeHlabathi yeFIFA Private Jet Aircraft Charter Flight Service elingasentshonalanga kwiNdebe yeHlabathi yenye yeendlela eziphambili ukuhamba kuba akubikho zonke ezo ngxaki. Wena uthathe imoto yakho komcu zabucala nilinike ude ubuyele. Le nkonzo mkhulu kuba nguwe umxhasi kuphela ukuba ukukhonza. Ukuqesha imoto idla umisele wena yi ixesha iivili bachukumise umhlaba lo moya.
le, phakathi izizathu ezininzi, ukuba kutheni kufuneka ukhethe yokuyiqhuba charter jet kwi INdebe yeHlabathi yeFIFA. Le intloko ebuhlungu kuba zililize ekungekho nzuzo ngayo ukujongana. Ukuya iNdebe yeHlabathi iya kube kanye amava ebomini kubantu abaninzi, kwaye uya kukhunjulwa ebomini ukuza. Musa ukuvumela inkumbulo babe kobuxhakaxhaka elalivela ukuqesha isithuthi okanye indiza embi. Thatha indiza ukuba ukhathazeke nobunzima free.
izikhululo zeenqwelo-moya jet Private eMoscow
Moscow Vnukovo ithandwa kakhulu abucala jet moya eMoscow, ibekwe 30km kumzantsi-ntshona kombindi wedolophu. moya wayo ingaphatha jet-moya yabucala nawuphi ubukhulu kwaye izibonelelo FBO iiyure ezingama-24 kubathengi jet abucala kunye nabasebenzi.
Ezinye iinketho moya baseMoscow Moscow Domodedovo, Moscow Sheremetyevo yaye Moscow Ramenskoye.
Charter a jet yabucala ku Russia 2018 YeNdebe yeHlabathi yeFIFA neendawo amabaye kuzo imizi imephu
A lilonke 12 kulolonke Russia uya kusingatha zalapho ukuba 2018 INdebe yeHlabathi yeFIFA. Ukongeza amabala eMoscow ne St Petersburg ezi:
Saint Petersburg eNkundleni, eMoscow